Sciences soLuntu Major Sociologists
UBawo wobuKomanisi wathonya iziganeko zehlabathi.
U-Karl Marx (ngoMeyi 5, 1818-Matshi 14, 1883), umongameli wezopolitiko wePrussia, intatheli, nomlobi, kunye nomlobi wezenzo zemithi, "iCommunist Manifesto" kunye no "Das Kapital," izizukulwana ezineempembelelo zeenkokheli zezopolitiko kunye nabahlali bezoqoqosho. . Eyaziwa nangokuthi nguYise wobuKomanisi, iingcamango zikaMarx zenza ukuba zivuseleleke, zihlaziye igazi, zazithe zaqalisa ukukhutshwa koorhulumente beenkulungwane, kwaye zikhonza njengesi siseko seenkqubo zezopolitiko ezisoloko zilawula ngaphezu kwama- 20 ekhulwini labantu- omnye kwabathathu abantu emhlabeni.
"Imbali ye-Columbia yehlabathi" yabiza imibhalo kaMarx "enye yezinto eziphawulekayo kunye neyokuqala kwimbali yolwazi lwabantu."
Ubomi boBomi kunye neMfundo
UMarx wazalwa e-Trier, iPrussia (iJamani namhlanje) ngoMeyi 5, 1818, kuHeinrich Marx noHenetta Pressberg. Abazali bakaMarx babengamaYuda, kwaye wayevela kumgama omde wabarabi kumacala omabini entsapho yakhe. Nangona kunjalo, uyise wayeguqula kwiLuthela ukuze aphephe ukulwa nobuhlanga ngaphambi kokuzalwa kukaMarx.
UMarx wafundiswa ekhaya nguyise ukuya kwinqanaba eliphakamileyo, kwaye ngo-1835, eneminyaka eyi-17 ubudala, wabhalisa kwiYunivesithi yaseBonn eJamani, apho wayefundela khona isicelo sikayise. Noko ke, uMarx wayenomdla ngakumbi kwifilosofi kunye neencwadi.
Ukulandela unyaka wokuqala eyunivesithi, uMarx waxhaswa noJenny von Westphalen, umfundisi oqeqeshiwe. Emva koko baza kutshata ngo-1843. Ngowe-1836, uMarx wabhalisa kwiYunivesithi yaseBerlin, apho kungekudala waziva ekhaya xa ejoyina isangqa seengcinga ezichukumisayo kunye nabacwangcisayo ababenomngeni kumaziko akhona kunye nemibono, kuquka inkolo, ifilosofi, imigaqo, kunye kwezopolitiko.
UMarx waphumelela kwisiganeli sakhe soogqirha ngo-1841.
Umsebenzi kunye nokuThunjwa
Emva kwesikolo, uMarx waphendukela ekubhaliweyo kunye neendaba zokuzixhasa. Ngomnyaka we-1842 waba ngumhleli wephephandaba le-liberal leCologne elithi "Rheinische Zeitung," kodwa urhulumente waseBerlin wawuvalile ukushicilela kunyaka olandelayo. UMarx washiya iJamani-akaze abuye-kwaye wachitha iminyaka emibini eParis, apho wahlangana khona kuqala nomdibanisi wakhe, uFriedrich Engels.
Nangona kunjalo, ukuxoshwa eFransi ngabangamandla abachasayo iingcamango zakhe, uMarx waya eBrussels, ngo-1845, apho waqalisa khona i-Party Workers 'Party kwaye wayesebenza kwiLungu lamaKomanisi. Apho, uMarx unxibelelana nabanye abahlakaniphileyo kunye nabasebenzi-kunye kunye ne-Engels-wabhala umsebenzi wakhe odumile, " iManfesto yamaKomanisi ." Ishicilelwe ngo-1848, iqulethe umgca odumileyo: "Abasebenzi behlabathi babumbene. Emva kokuthunjwa eBelgium, uMarx wagqiba ukuhlala eLondon apho wayehlala khona engabikho nantoni yokufuduswa ubomi bakhe bonke.
UMarx wasebenza kwi-journalism waza wabhala iincwadi zesiJamani kunye nesiNgesi. Ukususela ngo-1852 ukuya ku-1862, wayengumbhalane we "New York Daily Tribune," ebhala amanqaku angama-355. Wabuye waqhubeka ebhala nokuqulunqa iingcamango zakhe malunga nendalo yoluntu kunye nendlela awayekholelwa ngayo ukuba ingaphuculiswa, kunye nokukhankanya ngokukhawuleza intlalo yoluntu.
Wachitha ixesha lobomi bakhe esebenza kwi-tome ye-volume volume, "Das Kapital," eyayibona umqulu wayo wokuqala owapapashwa ngo-1867. Kulo msebenzi, uMarx uzimisele ukuchaza impembelelo yezoqoqosho kwintlangano, apho iqela elincinci, Wabiza i-bourgeoisie, enegunya lokuvelisa kwaye wasebenzisa amandla akhe ukuba asebenzise kakubi i-proletariat, iqela elisebenzayo eliye lavelisa iimpahla eziye zaphucula iintlanzi ze-capitalist.
Ii-Engels zahlelwa kwaye zapapashwa imiqulu yesibini neyesithathu "iDas Kapital" kungekudala emva kokufa kukaMarx.
Ngoxa uMarx wahlala engumntu ongaziwayo ngexesha lakhe lobomi, iingcamango zakhe kunye neengcamango zeMarxism zaqala ukuba nempembelelo enkulu kwimimandla yentlalo-ntsapho emva kokufa kwakhe. Wadlalwa ngumhlaza ngoMatshi 14, 1883, wangcwatywa eMangcwabeni e-Highgate eLondon.
Iingcamango zikaMarx malunga noluntu, ezoqoqosho, kunye nezopolitiko, ezibizwa ngokuba yiMarxism, zithetha ukuba lonke uluntu luqhubela phambili ngokudityaniswa komzabalazo weklasini. Wayegxeka uhlobo oluthile lwezoqoqosho noluntu, oluthetha ngokuba ngumlawuli wobuthakathaka, ekukholelwa ukuba luqhutywe ngabafundi abaphakathi kunye nabasemgangathweni abacebileyo, kwaye baqikelele ukuba kuya kuveliswa ngaphakathi ukuxhatshazwa okuya kubangela ukutshatyalaliswa kwayo kunye nokutshintshwa kwenkqubo entsha, yentlalo-ntsapho.
Ngaphantsi kwezenhlalakahle, waxela ukuba uluntu luya kulawulwa ngumbutho osebenzayo kulowo abiza ngokuthi "ulawulo lobukhosi." Wayekholelwa ukuba ukuhlaliswa kwezenhlalakahle ekugqibeleni kuya kutshintshwa ngumntu ongenamthetho, uluntu olungenakuqhathaniswa olubizwa ngokuba yi- communism
Ingaba uMarx uzimisele ukuba i-proletariat iphakame kwaye ivuselele inguqulelo okanye ingaba ivakalelwa kukuba iinjongo zobukhomanisi, zilawulwa ngumbutho olinganayo, ziza kuqhutyelwa ingxowankulu, zixutyushwa nanamhla. Kodwa, iinguqu ezininzi eziphumelelayo zenzeke, ziqhutywe ngamaqela awamkela i-communism-kuquka nelaseRussia , 1917-1919 kunye neChina, ngo-1945-1948. Amaflegi kunye namabhanantshi abonisa uVladimir Lenin, inkokeli yeRussian Revolution, kunye noMarx, yayilinde ixesha elide kwiSoviet Union . Kwakunjalo e-China, apho iiflegi ezifanayo zibonisa inkokeli yokuguqulwa kwelo lizwe, uMao Zedong , kunye noMarx nabo babonakaliswa ngokugqithiseleyo.
UMarx uchazwe njengomnye wamanani anempembelelo kwimbali yabantu, kwaye kwi-1999 i-poll ye-BBC yavotelwa "umcingeli wewaka leminyaka" ngabantu abavela kwihlabathi lonke. Isikhumbuzo kwingcwaba lakhe sihlala sihlanganiswa ngamathokheni okubonga evela kubalandeli bakhe. Ilitye lokungcwaba lakhe libhalwe ngamazwi atyhilela abo "kwiManistesist Manifesto," ebonakala ibonakalisa impembelelo kaMarx kwiimeko zezopolitiko kunye nezoqoqosho: "Abasebenzi bamazwe onke babumbana."
Ubani uAlexis de Tocqueville?
Indlela iWEB Du Bois eyenze ngayo uMarko wakhe kwi-Sociology
I-Biography yeC. Wright Mills
U-Emile Durkheim wayenza njani uMarko wakhe kwi-Sociology
Ubomi beAntonio Gramsci
Ubomi Nomsebenzi kaWoward S. Becker
Ziqhelise ukuchonga ii-Appositives kwiZigwebo
UMichael Jackson ukhulula umxhwele
Ukuxelela iindaba - Ukulinganisa izimvo zakho
Uthini Umehluko Phakathi Kobuhlungu Neyingozi?
Isifundo soSifundo: Iingcamango zokubukela
Imfazwe yaseMelika: iMandla Jikelele uJohn Sedgwick
Iintsuku ezili-10 zeeMama zoNyaka
Ukuqonda i-Shakespeare "Iiminyaka ezisixhenxe zeMntu" kwiLizwe la namhlanje
Ukutshatyalaliswa kwezithombe zeBamiyan